Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic kwe-Asphalt Rejuvenators - Hielscher Ultrasound Technology
Ukuvuselela kabusha i-asphalt kanye nama-rejuvenators kunika amandla ukuphinda kuvuselelwe amapayipi asphalt akhona ngokusebenzisa ama-ejenti wokuvuselela izinto zokwakha.
Izihlanza ze-Ultrasonic ziyindlela enamandla yokuxuba izinhlayiya ze-nano-amaconsi nano-amaconsi ku-asphalt kanye ne-bitumen emulsions.
I-Ultra Power isetshenziselwa ukwenza izengezo ezisebenza ngokuphezulu zamapayipi ahlala isikhathi eside.
Imfucumfucu eyenziwe yomile, eyomile, esegugile futhi ephukile ilahlekile ngo-oyela wayo wokuqala futhi ilinyazwa yi-oxidation, kuze kube yilapho sekuqhekeka imifantu, imigodi nokugabha kwendlela yesondo ngaphezulu. Mayelana nenani elikhulu le-asphalt elisetshenzisiwe ekwakheni, ukuvuselelwa kabusha nokwakhiwa kabusha kwezindawo zokwakha nezinye izakhiwo ze-asphalt ngumkhakha obalulekile, osiza ukonga izinsiza kanye nokusebenzisa izindleko.
Izakhiwo ezikhona ze-asphalt, ezilinyazwe yisimo sezulu, ubudala kanye nomthwalo wethrafikhi, zingavuselelwa kabusha futhi ziphinde zenziwe kabusha ngokusetshenziswa kwezimpawu zenkungu, uphawu lwamathambeka, iziphandla ze-chip, uphawu lwezimpawu zasendlini, uphawu lwezintambo zasekapa nezinye izimbangi zasaphaza. Lezo zakhi zama-seal zinengxube yamanzi, i-asphalt emulsion, iqoqo
Amigwaqo efuze i-asphalt eguquliwe equkethe ama-nanoparticles aqinisayo akhombisa izakhiwo ezifiselekayo ezishisayo, zikagesi nezemishini futhi ngaleyo ndlela zenze ngcono ukusebenza. Ukuze sinciphise izindleko ze-asphalt binder kanye nokulungiswa kwemigwaqo nokwandisa ubungani babo bemvelo, ubuchwepheshe obuhlukile obufana nezinhlanganisela ezihlanganisiwe kanye nokusebenza okuhle kanye nokwakhiwa okusha kwe-asphalt, okunamandla okuzilungisa, kubalulekile ukulonda nokuvuselela okukhona amatshe endawo ngokuzayo.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic Yezithasiselo ze-Asphalt Emulsions
I-asphalt emulsion iqukethe izinto ezintathu eziyinhloko: i-asphalt, amanzi kanye ne-emulsifying survivant. Ukuba yisisekelo sokuhlakazeka okuqinile kwamaconsi kasawoti emanzini, i-asphalt emulsion ingadonswa, igcinwe futhi ihlanganiswe ne-aggregates. I-emulsion kufanele “iphule” ngokushesha lapho ihlangana ne-aggregate lapho ixubene noma ngemuva kokufafazwa. Ukuqhekeka ukuhlukaniswa kwamanzi ku-asphalt. Lapho amanzi esekhiphile, i-emulsion ithi "setha". Ngemuva kokuphula, ukuphulukisa nokulungiselela, izinsalela ze-asphalt zinokunamathela, ukuqina nokuqina kokumelana kwamanzi kwe-asphalt yangempela yasekuqaleni.
I-Ultrasonic emulsation ivumela ukwakheka kwe-asphalt emulsions ephezulu
Indlela ye-emulsifying ye-ultrasonic ihambelana nama-emulsifier amaningi kanye nokwakhiwa okunamandla. Ukuzikhethela kwe-emulsifier kunomthelela wezimpawu zokusetha ze-asphalt emulsions, kuzenze zibeke kancane, ukubeka okuphakathi kanye nokubekwa okusheshayo. Izengezo, ama-modifera, izihlungi, imicu, izicubu kanye nezinye izithako zokwenziwa kungangezwa phakathi nezigaba ezahlukahlukene zenqubo ye-sonication – ngokuya ngesakhiwo nokwenziwa kokuhlanganiswa kwezidingo ezithile.
I-UIP4000hdT – Ama-4000 watts ahlanganisi we-inthanethi ohlangulwayo
Isigaba se-emulsion se-asphalt emulsion ne-asphalt rejuvenator siyinto ebalulekile, enquma ukuhlukaniswa kwe-velocity (okusheshayo, okuphakathi nendawo noma okuhamba kancane). Uhlobo (i-ionic / non-ionic) kanye nokugxiliswa kwama-emulsifying agents kanye nokuqagela kokuqanjwa okufana nokulinganisa kwe-emulsions / solids, i-porosity, usayizi wezinhlayiya kanye nokukhula komzimba kuthonya ekusetshenzisweni kokusethwa. Njengoba amapharamitha we-emulsification we-ultrasonic angalawulwa ngokuqondile, umthelela we-sonication ku-emulsion ungalungiswa kukhwalithi ye-asphalt eqondisiwe. Isimo sezulu se-micron-, i-submicron noma i-nano-emulsions sihlosiwe, ukucubungula kwe-ultrasonic kukunikeza ukulawula okugcwele ngaphezulu kwemingcele yenqubo.
I-Asphalt emulsions ikhombisa ukubonakala kwe-approx. I-50-1000 cP ku-60 ° C, ephansi kakhulu kune-viscosity ye-asphalt uqobo (10,000-400,000 cP). Ngenxa yokubukeka kwabo okuphansi, i-asphalt emulsions ingafakwa kusetshenziswa amasu okushisa aphansi, anciphisa ukuphuma nokusetshenziswa kwamandla, kugwemeke i-asphalt oxidation, futhi ayinangozi enkulu kunamasu wokushisa asphalt. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe-asphalt emulsions kunokonga kakhulu futhi kuyimvelo ngaphandle kwamasu abandayo asebenzisa ama-asphalts we-cutback. I-Viscosity kanye ne-rheology ye-asphalt emulsion emulsions ingathonywa futhi ilungiswe yi-emulsifier okuhlushwa kanye nokufakwa kwamandla ngesikhathi sokumiswa kwe-ultrasonic.
Amandla wokungena kwama-asphalt rejuvenators aqakathekile, ngoba umsebenzeli ophinda asebenze kahle ungena esakhiweni sendawo bese ubopha uphawu ebusweni. I-rephvenator esebenza kahle esebenza phezulu, ekwazi ukungena ngokujulile phakathi kwe-asphalt binder (ibhitume), ikhulisa ukuguquguquka futhi iphinde ibuyise ngaphakathi ngaphakathi ukuze ukuzilolonga kwendlela kufinyeleleke. Lungiselela ukusebenza kahle kakhulu kwe-asphalt emulsions eyakha i-submicron- ne-nano-sized droplets ngamandla we-ultrasound!
Ama-polymers, irabha, izihlungi, uwoyela kanye nama-ejenti wokuvuselela kufakelwa ama-asphalt emulsions ukuze kuthuthukiswe izakhiwo ezibalulekile ze-asphalt yendabuko, njengokugibela okuphezulu nokuphansi kokusebenza kokulinganisa (PG), ukubukeka kokuphamba, ukuqhekeka okushisa aphansi, ukuguguleka nokucindezela kokuvuselela, ukuthambisa iphuzu nokungena, ukuhlangana nokuqina kwama-polymers nokuvuselela kabusha asphalt asebekhulile ku-RAP / RAS ukuxubana (ukubizwa kabusha kwe-asphalt lami (RAP) nokuphinda kufakwe kabusha i-asphalt shingles (RAS). Abahlanzayo be-Ultrasonic baxuba ama-solids namaconsi njengezinhlayiya ze-monodisperse ku-emulsion ye-asphalt. Ubuchwepheshe be-Ultrasonic ukuxuba nobuchwepheshe bokuxubha bukhiqiza izingxube ze-asphalt eziphakeme kakhulu!
I-Ultrasonic emulsation kanye nokuhlakazeka kufanelekile ukulungiselela ama-master batches we-asphalt emulsions egxile kakhulu. Ama-emulsions alungiselelwe nge-Ultrasonically alungiselelwe ngokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwe-asphalt (aze afike ku-90%) afakwa ngemuva kwesikhathi ukuze afinyelele kuma-70% noma ama-60% okuhlushwa ukuze afinyelele kulayini oyifunayo wamanzi / kwesigaba samafutha ngokusho kwesicelo sokugcina.
UIP16000 – Amandla we-16kW we-ultrasound ngeyunithi ngayinye yokuxuba ye-ultrasonic
Izinzuzo ze-Ultrasonic Asphalt Emulsions
Ubuchwepheshe bokuxuba i-ultrasonic buvumela ukuthuthukisa nokukhiqiza ukwakheka kwe-asphalt okulula ukuphatha, okungabizi kakhulu futhi okusebenzelana kahle nemvelo. Amandla e-ultrasonic anamandla amakhulu akha i-sub-micron ne-nano dispersions kanye ne-emulsions, ekhombisa ukungena okuhle, ukusebenza okuphezulu, nokukhuthazela isikhathi eside.
Hlanganisa ama-emulsions akho wokuhambisa kanye nokuhlakazeka kokuxutshwa kwe-asphalt nge-high-Power ultrasonication!
Isisabalalisi Esiphezulu se-Ultrasonic se-Asphalt Emulsions
I-Hielscher Ultrasonics yenza futhi inikeze abaxuxuli be-ultra enamandla aphezulu we-asphalt ne-bitumen emulsions. Abahlaziyi be-ultrasonics basezimboni abanikeza i-inline emulsation offer bavula amathuba okuthi bacubungule uhla oluningi lwe-asphalt ne-bitumen emulsions. I-Sonication ivumela ukuhlolwa kwe-facile kwezakhi ezintsha, ezifakwe ngokufana ngokuqina kokuqina nokusebenza okuhle kwe-emulsion. Ama-geometries ahlukahlukene we-ultrasonic reactor kanye nokufakwa okufana ne MultiPhaseCavitator vumela ukuguqulwa okulula kweprosesa le-ultrasonic ku-asphalt yakho ethile noma ekwakhiweni kwethamu.
I-coxse coxse ye-ketshezi nama-solids ifakwa ku-ultrasonic disperser, lapho izigaba zombili (amanzi + asphalt noma i-bitumen + izithasiselo zokuzikhethela) zitholakala zimanzi futhi zigaya ngendlela efanayo zibe ukumiswa okuzinzile kwe-colloidal. I-Ultrasonic milling kanye nokuhlakazeka iyakwazi ukucubungula amanani aphezulu kwinqubo esheshayo.
Wang, H .; Yang, J.; UGong, M. (2016): Ukuqanjwa Kwama-Rheological of Asphalt Binders and Mixtures Modified neCarbon Nanotubes. Amaphepha Wenkomfa YeRILEM 2016.
Ronald, M .; I-Pumarejo Luis, F. (2016): Ukwakhiwa kwe-Asphalt emulsions: Isimo se-state-of-the-art nokuthembela ekwakhiweni kwezakhiwo ze-emulsions. Izinto Zokwakha Nokwakha 123, 2016. 162-173.
Yini i-Asphalt Emulsion?
I-asphalt emulsion iyinhlanganisela yamanzi ne-asphalt. Njengoba i-asphalt iyindawo enamafutha, i-hydrophobic composed, ayinakuhlanganiswa namanzi. Ngokungeza i-ejenti ephezulu esebenza futhi eyaziwa ngokuthi i-emulsifier, i-survivant, i-ejenti ye-emulsifying, i-stabilizer) emanzini ngaphambi noma ngesikhathi sokufaka i-asphalt, i-asphalt namanzi ziyaxutshwa. Ukufakwa kwe-surgonant kusiza ukuhlakazwa kwezinhlayiya ze-asphalt esigabeni samanzi (i-water) futhi kugcina kuhlakazekile kumiswa. Ukuxuba i-asphalt njengezinhlayiya ezincane kokumiswa, kusetshenziswa imishini yokuxuba i-shear (isbtratiatior, i-high-shear mixer, i-colloidal mill njll). I-asphalt emulsion esezingeni eliphakeme inika amandla okulwa naphansi, ukuthambeka komswakama, ukumelana nokuqhekeka kanye nokusebenza kokukhathala.
"I-emulsion uhlelo oluhle kakhulu olungazinzisi olwakhiwe okungenani ngezigaba ezimbili ezingamanzi ezingafinyeleleki, lapho eyodwa ihlakazeka kolunye ngesimo samaconsi amancane (ubuhlalu) obubanzi bawo buphakeme kakhulu kuno-0.1µm. Uhlelo olunjalo lunokuqina okuncane okungathuthukiswa ngokungezwa kwama-ejenti afanele, thina bantu abasebenzisa izinto ezithile, noma sihlukaniswe ngokuqinile ”. (Becher, P. Emulsion. Theory and Practice. 1961.)
IBitumen yinto esetshenziselwa usimende esetshenziselwa ukwakhiwa njenge-asphalt binder, ebamba i-asphalt ndawonye. Inephuzu lokuncibilika le-180ºC. Ama-emulsions we-Bitumen uketshezi olunsundu omnyama, olungaba yi-cationic, lapho ama-emulsions enamaconsi anemithambo emihle, noma i-anionic, lapho ama-emulsions enamaconsi amangalela ngokungafanele.
Ayini ama-Slurry Seals?
Amanzi ashelelayo ayindlela yamanzi, i-asphalt emulsion, i-aggregate, nezinye izengezo endaweni ekhona yephansi. I-slurry seal ifana ne-fog seal ngaphandle kwe-slurry seal enezinto ezihlanganayo njengengxenye yomxube. I-Polymer iyisengezo esivamile esithuthukisa izakhiwo ze-asphalt emulsion. Le nhlanganisela ehlangene ye-emulsion nama-aggregates yilokho okubizwa ngokuthi yi-slurry ukuze kuvikeleke ukwakheka komhlaba ongaphansi komhlaba nokunikeza umgwaqo omusha womgwaqo.
Yini Izinhlamvu Zenkungu?
Ukubekwa kwenkungu kubhekiswa kusetshenziswa kwe-asphalt emulsion ekhethekile eyenziwe endaweni ekhona yomgwaqo wasephalt. I-fog seal emulsion inengxube yama-oyili wamanzi, engafafazwa kalula emendweni osele ukhona, owaziwa nangokuthi "fogging."
Yini ama-Chip Seals?
Ukusetshenziswa kweshidi le-chip kufaka phakathi i-asphalt emulsion equkethe ama-globules e-asphalt, amanzi, i-ejenti emulsifying noma i-survivant, i-polymer, futhi imvamisa isengezo sokuvuselela amandla. Izimpawu ze-CHip zisetshenziselwa inqubo yezinyathelo ezimbili ezibandakanya kuqala ukusatshalaliswa kwe-asphalt emulsion bese kuthi ngemuva kwalokho kube yingqimba yedwala elincane elichotshoziwe endaweni ekhona yomgwaqo wasephalt. Idwala elincane elichobozekile libizwa nangokuthi “izicubu”, enikeza i-chip yokubeka uphawu igama layo.
Yini amaScrub Seals?
Ukwelashwa kwe-scrub seal kufana kakhulu nokufakwa uphawu kwe-chip, lapho kusetshenziswa i-asphalt emulsion ne-gravel echobozekile ukuvuselela umgwaqo olimele we-asphalt. Umehluko kuphela indlela yokufaka isicelo: Ukuze kusetshenziswe uphawu lwescrub, i-asphalt emulsion isetshenziswa yilokho okubizwa ngokuthi yimishanguzo, okuqinisekisa ukuthi i-asphalt emulsion ingena ekuguguleni kwendlela.
Yini ama-Seal Cape?
Ukubekwa uphawu kwensimbi yaseCape kusho ukusetshenziswa kwe-chip noma iscrub seal ngesicelo esilandelako se-slurry seal noma i-microsurfacing ngemuva kwesikhathi. Ngenkathi i-chip noma i-scrub seals seal futhi ibopha imifantu kusendlalelo ekhona ekhona, uphawu olushelelayo noma isibonakhulu esincane sithuthukisa ukugcinwa kwe-chip nobushelelezi bomgwaqo wendlela. ICape ibopha uphawu olusetshenziswa kakhulu njengezikhathi zokusebenza ngezikhathi ezithile, ezisetshenziselwa ukwakheka kwe-asphalt okubonisa kuphela usizi olulinganiselayo, ukonakala okuncane noma okungekho, ububanzi obuqhekekile bokuqhekeka. Ukubopha uphawu kweCape kusetshenziswa kakhulu njengendlela yokwandisa impilo yendawo yokuhlala kuze kube yilapho kwenziwa kabusha noma kwakhiwa kabusha.
I-Microsurfacing ukwelashwa okuqhathaniswa ne-slurry seal. Ukuze uthole imicrosurfacing, isakhi esakhiwa emanzini, i-asphalt emulsion, i-aggregate, nezinye izithasiselo zamakhemikhali asetshenziswa ngaphezulu kwendlela egandayiwe kukakhonkolo. Izithasiselo zePolymer zisetshenziselwa ukwenza ngcono izakhiwo zezingxube ze-asphalt emulsion. Umehluko omkhulu phakathi kwe-slurry seal ne-microsurfacing yindlela yokuthi "baphuka" noma baqina kanjani. Ngenkathi ukubopha uphawu kufiphaza kudinga ukuthi amanzi avele kusuka ku-asphalt emulsion ngemuva kokusatshalaliswa kwayo, i-asphalt emulsion ekuhlanganisweni okuyi-microsurfacing iqukethe izithasiselo zamakhemikhali ezikuvumela ukuthi ziphule ngaphandle kokuncika elangeni noma ekushiseni ukuze kuphume amanzi. Lokhu kwenza i-microsurfacing indlela yokwelashwa ethandwa kakhulu yemigwaqo esetshenziswa kakhulu (isikhathi esifushane sokuphumula) noma isimo sezulu esibandayo.
Kuyini Ukubangela Ukudilika Kwembangela?
Njengoba iminyaka yendlela yepansi iqala ukonakala. Ukuthi yephuka ngokushesha kangakanani kuthonywa yizinto eziningi. Izici eziyisisekelo imvelo kanye ukulayisha traffic. Ukukhanya kwelanga ngokuhamba kwesikhathi kufaka ungqimba olungaphezulu komhlaba futhi kubangele ukuba lungabinamandla. Uma umgwaqo ongaphansi ungqubu kakhulu, uqala ukwakheka njengomphumela wokuphindwaphindwa okuphezulu kokulayishwa kwetrafikhi. Uma umgwaqo ongaphansi ungavaliwe kahle, amanzi emvula noma amanzi wokunisela angafaka imifantu engxenyeni eyisisekelo futhi ilimaze ukwethembeka kwesakhiwo kwendlela. Amanzi angashona noma ahlanze izingqimba zesisekelo esingaphansi futhi abangele ukuba umgwaqo wehluleke ngenxa yokuntuleka kokusekelwa.